Ryanair oo baajinaysa duulimaadyo badan - BBC News Somali
Ryanair oo baajinaysa duulimaadyo badan
Mid ka mid ah shirkadaha diyaaradaha ee aduunka aadka looga yaqaano ee Ryanair ee laga leeyahay dalka Ireland ayaa lagu soo waramayaa in ay baajinayso wax ka badan 50 duulimaad maalin kasta kadib markii sida la sheegay ay shirkadda qalqalgalisay jadwalka duuliyeyaasha.
Illaa 400,000 qof ayuu hakadkani saamaynayaa, waxaana shirkadda lagu cadaadiyay in ay shaaciso xogta la xiriirta duulimaadyada baaqanaya.
Ryan Air oo laga leeyahay dalka Ireland ayaa waxaa la asaasay sanadkii 1984-tii, waxayna ka mid tahay shirkadaha ugu qiimo jaban ee la raaco.
Ryanair ayaa sidoo kale la sheegay in qaar ka mid ah duuliyeyaasheeda ay u wareegeen shirkadda diyaaradaha Norwegian Air, waxaa kale oo shirkadda uu dhib ka haysto xagga qaadashada duuliyeyaal cusub oo shaqada u qalma.
Afhayeen u hadlay Norwegian Air ayaa yiri "waxaan qireynaa in illaa 140 duuliya ay sanadkan oo kaliya nooga soo wareegeen shirkadda Ryan Air", balse sheegashadaasi kama aysan hadlin Ryan.
Rakaabka ay arrintan saamaynta ku yeelatay ayaa dib loogu jadwaleeyay duulimaadyadooda ama lacagtooda ayaa dib loogu celiyay.
Shirkaddan ayaa waxaa lagu eedeeyay in ay isla sugtay fasaxyada ay qaadanayaan duuliyeyaasha, taasna waxa ay keentay in duuliyeyaal badan ay markaliya fasax wada qaataan sanadkan dhammaadka ah.
Caro badan ayaa ka dhalatay in shirkadda ay baajiso duulimaadyada, waxaana jira dad badan oo rakaab ah oo baraha bulshada ku qoraya ku qanacsanaan la'aantooda waxa dhacaya.
Wariya arrimaha gaadiidka cirka uga faalooda BBC-da oo lagu magacaabo Richard Wescott ayaa sheegay in waxa ugu weyn ee dadka ay ka xumaadeen in ay tahay xogta yar ee ay shirkadda ka bixinayso duulimaadyada la baajiyay kuwa ay yihii.
Ryanair ayaa waxa ay soo daabacday duulimaadyada baaqanaya illaa maalinta arbacada ah oo kaliya, iyada oo arrintan ay soconayso muddo 3 todobaad ah.
Saamiga suuqa ee Ryanair ayaa hoos u dhacay %3 kadib markii uu soo baxay warkan.
Rakaabka maxay xaq u leeyihiin ?
•Rakaabka waxa ay xaq u leeyihiin in ay helaan caawin ama magdhow haddii baaqashada duulimaadka uu yahay mid ay sababtay shirkadda oo aanan sabab kale ku iman.
•Shirkadda waa in ay bixisaa magdhow lacagtii tigidka oo buuxda muddo 7 maalmood gudahood ah ama ay dib u jadwalaysaa duulimaadka muddo kooban gudaheed.
•Haddii qofka rakaabka ah uu ka dib dhoco xiligii uu ku gaari lahaa meeshii uu socday wax ka badan muddo 3 saacadood ah, waxa uu xaq u leeyahay in la siiyo 200 illaa 600 oo Euro oo magdhow ah.
Tirada Duulimaadyada gudaha Nigeria oo la dhimay
Mareykanka oo xayiraadda laabtoobyada ka qaaday duulimaadyada Emirates